ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ အမဖြစ်သူအား ရည်စူး၍ သက်ပျောက် ဆွမ်းသွပ်ခဲ့တဲ့ ကိုထူးအယ်လင်း ရဲ့ ဗီဒီယို…. – Cele Oscar
ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ အမဖြစ်သူအား ရည်စူး၍ သက်ပျောက် ဆွမ်းသွပ်ခဲ့တဲ့ ကိုထူးအယ်လင်း ရဲ့ ဗီဒီယို….
အသံပါဝါ အား ကောင်းကောင်း နဲ့ သီချင်းတွေ သီဆိုကာ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေးမှု တွေကို သိမ်းပိုက် ရရှိထား သူကတော့ အဆိုတော် ထူးအယ်လင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက တော့ ပြည်သူ တွေရဲ့ လိုအပ်တဲ့ အရာတွေ ကို မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့ သွား ရောက်ကာ လှူဒါန်းနေသူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကုသိုလ်ရေးတိုင်း လက်မနှေးသူ ဖြစ်တာကြောင့် လည်း ပရိသတ် တွေက အတုယူ လေးစား နေကြရ တာပါ။
မနေ့ ကတော့ ထူးအယ်လင်း ရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ မှာ ဝမ်းနည်းစရာ သတင်းတစ်ခု ဝေမျှ လာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ အိမ်ထဲမှာ နေနေ ရင်းနဲ့ ဝမ်းဗိုက် သို့ ကျည်ဆံ ထိမှန် သွားတာကြောင့် ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့ပေမယ့် လည်း ညနေပိုင်း တွင် ကွယ်လွန် သွားခဲ့ တာ ကို ရေးသားထားတာပါ။ ချစ်ခင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း များ နဲ့ ဂီတ လောကမှ ညီအစ်ကို မောင်နှမ များကလည်း ထူးအယ်လင်း ရဲ့အစ်မ ကွယ်လွန် သွားတဲ့ အတွက် မိသားစု နှင့်ထပ်တူဝမ်းနည်းရကြောင်း Comment များ ရေးသားထားကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာ လည်း ကျည်ထိပြီး ကွယ်လွန် သွားခဲ့တဲ့ အစ်မ ဖြစ်သူအား ရည်စူးပြီး သက်ပျောက် ဆွမ်းသွပ်ကာ အ မျှပေးဝေ ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူကလည်း ” ၂၇.၃.၂၀၂၁ စနေနေ့ နေ့လည် ကျည် ထိပြီး ညနေမှာ ကွယ်လွန် သွားတဲ့ တနင်္ဂနွေ သမီး အမ မဥမ္မာရှိန် အသက် ၅၀ နှစ် အားရည်စူး ၍ သက်ပျောက် ဆွမ်းနှင့်သင်္ကန်း ဝတ္ထူကပ် အလှူကို ယနေ့ ၂၈.၃.၂၀၂၁ တနင်္ဂနွေ နေ့မနက် ၁၀:၁၅ မှာ သံဃာ ငါးပါး အား ကပ်လှူဖြစ်တယ်။ ရက်လည် အတွက်ကို လည်း ထပ်မံ ကုသိုလ်ပြုပါမယ်။
ငါ့အစ်မ အသက် ခန္ဓာရှိစဉ်က တစ်နိုင် ပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ် အစုစု၊ သက်ရှိ ထင်ရှား မိခင် မေမေ ပြုခဲ့တဲ့ ကောင်းမှုအစုစု ၊ငါ ပြုခဲ့တဲ့ ကောင်းမှု ကုသိုလ် အစုစုတို့ကို ရောက်ရာ ဘုံဘဝ မှနေ၍ ကြားသိ သာဓုခေါ်ဆို ကုသိုလ်အမျှ ရပါစေဗျာ🙏🙏🙏အမျှ အမျှ အမျှရပါစေ 🙏သာဓု သာဓု သာဓု🙏🙏🙏” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေလည်း ကြည့်ရှု နိုင်စေရန် ဗီဒီယိုဖိုင် ကိုပါ တစ်ဆင့် ပြန်လည် ကူးယူ တင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
အသံပါဝါ အား ကောငျးကောငျး နဲ့ သီခငျြးတှေ သီဆိုကာ ပရိသတျတှေ ရဲ့ အားပေးမှု တှကေို သိမျးပိုကျ ရရှိထား သူကတော့ အဆိုတျော ထူးအယျလငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူက တော့ ပွညျသူ တှရေဲ့ လိုအပျတဲ့ အရာတှေ ကို မွနျမာနိုငျငံ အနှံ့ သှား ရောကျကာ လှူဒါနျးနသေူ တဈယောကျ လညျး ဖွဈပါတယျ။ ကုသိုလျရေးတိုငျး လကျမနှေးသူ ဖွဈတာကွောငျ့ လညျး ပရိသတျ တှကေ အတုယူ လေးစား နကွေရ တာပါ။
မနေ့ ကတော့ ထူးအယျလငျး ရဲ့ လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာ မှာ ဝမျးနညျးစရာ သတငျးတဈခု ဝမြှေ လာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကတော့ အိမျထဲမှာ နနေေ ရငျးနဲ့ ဝမျးဗိုကျ သို့ ကညျြဆံ ထိမှနျ သှားတာကွောငျ့ ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့ပမေယျ့ လညျး ညနပေိုငျး တှငျ ကှယျလှနျ သှားခဲ့ တာ ကို ရေးသားထားတာပါ။ ခဈြခငျရတဲ့ မိတျဆှေ အပေါငျးအသငျး မြား နဲ့ ဂီတ လောကမှ ညီအဈကို မောငျနှမ မြားကလညျး ထူးအယျလငျး ရဲ့အဈမ ကှယျလှနျ သှားတဲ့ အတှကျ မိသားစု နှငျ့ထပျတူဝမျးနညျးရကွောငျး Comment မြား ရေးသားထားကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာ လညျး ကညျြထိပွီး ကှယျလှနျ သှားခဲ့တဲ့ အဈမ ဖွဈသူအား ရညျစူးပွီး သကျပြောကျ ဆှမျးသှပျကာ အ မြှပေးဝေ ခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူကလညျး ” ၂၇.၃.၂၀၂၁ စနနေေ့ နလေ့ညျ ကညျြ ထိပွီး ညနမှော ကှယျလှနျ သှားတဲ့ တနင်ျဂနှေ သမီး အမ မဥမ်မာရှိနျ အသကျ ၅၀ နှဈ အားရညျစူး ၍ သကျပြောကျ ဆှမျးနှငျ့သင်ျကနျး ဝတ်ထူကပျ အလှူကို ယနေ့ ၂၈.၃.၂၀၂၁ တနင်ျဂနှေ နမေ့နကျ ၁၀:၁၅ မှာ သံဃာ ငါးပါး အား ကပျလှူဖွဈတယျ။ ရကျလညျ အတှကျကို လညျး ထပျမံ ကုသိုလျပွုပါမယျ။
ငါ့အဈမ အသကျ ခန်ဓာရှိစဉျက တဈနိုငျ ပွုခဲ့တဲ့ ကုသိုလျ အစုစု၊ သကျရှိ ထငျရှား မိခငျ မမေေ ပွုခဲ့တဲ့ ကောငျးမှုအစုစု ၊ငါ ပွုခဲ့တဲ့ ကောငျးမှု ကုသိုလျ အစုစုတို့ကို ရောကျရာ ဘုံဘဝ မှနေ၍ ကွားသိ သာဓုချေါဆို ကုသိုလျအမြှ ရပါစဗြော🙏🙏🙏အမြှ အမြှ အမြှရပါစေ 🙏သာဓု သာဓု သာဓု🙏🙏🙏” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာပဲ ဖွဈပွီး ပရိသတျတှလေညျး ကွညျ့ရှု နိုငျစရေနျ ဗီဒီယိုဖိုငျ ကိုပါ တဈဆငျ့ ပွနျလညျ ကူးယူ တငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။
သူမငယ်စဉ်ကတည်းက ဖခင်ဆုံးရှုံးခဲ့သူမို့ မိဘမဲ့သွားတဲ့ကလေးတွေကို ကိုယ်ချင်းစာကြောင်း ရင်နာနာနဲ့ ဝမ်းနည်းစွာပြောပြလာခဲ့တဲ့ မိတ်ကပ်ညီညီမောင်